‘हाम्रो विजयलाई कसैले पनि रोक्न सक्नेछैन’ – नेत्र बिक्रम चन्द ‘विप्लव’ (ताजा अन्तर्वार्ता ) – ejhajhalko.com
झझल्को न्युज डेस्क २९ माघ २०७६, बुधबार ११:०४ 1014 पटक हेरिएको
नेपालमा शोषित-पिडित र उत्पीडित लगायत सर्वहारा वर्गको राज्यसत्ता स्थापना गर्ने मूल उद्देश्यका साथ् २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि दिर्घकालिन जनयुद्ध घोषणा भएको थियो। त्यस जनयुद्धले अन्य राजनीतिक पार्टीहरुको सहयोगमा नेपालमा जरो गाडी बसेको तानाशाही र निरङ्कुश राजतन्त्रको समाप्त गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना गर्यो। नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्तिक युगमा प्रवेश गरेको अवस्थामा सबैले नेपाली रास्ट्रियता बलियो हुने, सबै नेपाली एकजुट भएर मुलुकलाई बिकसित र संवृद्ध बनाउन लागिपर्ने आशा र बिश्वास गरेका थिए। तर मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्तिक ब्यबस्था आएपछि नेपाली रास्ट्रियता कमजोर हुँदै गएको शोषित-पिडित र उत्पीडित जनता झन् दब्बिएर बस्नुपर्ने अवस्था आएको, चौतर्फी रुपमा अन्याय, अत्याचार, भ्रस्टाचार, महंगी, शोषण र उत्पीडन बढेको जस्ता कैयौं जनगुनासाहरु बढिरहेका छन्।
मुलुकमा नाम मात्रको भए पनि कम्युनिष्टको दुई-तिहाइको सरकार रहेको छ। तर जन असन्तुष्टि घट्नुको सट्टा दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ। दिन प्रतिदिन नेपाली जनताले रास्ट्रियता समाप्त पार्ने एमसीसी सम्झौता, अरबौं ठगी गर्ने एनसेल, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बेचिखाने उच्च राजनीतिक नेतृत्व र दलालका बिरुद्ध एक भएर चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन्। तर आफ्ना पार्टीका नेता संलग्न रहेको आशंकामा सत्तारुढ नेकपाले जनताका ती आन्दोलनप्रति सरकारमार्फत दमन गरिरहेको छ।
यसै सन्दर्भमा सरकारद्वारा प्रतिबन्धित बिप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले पनि २५ औं जनयुद्ध दिवस मनाउने तयारी गरिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा रातोखाबर साप्ताहिकले बिद्रोही नेकपाका महासचिव बिप्लवसंग गरेको अन्तर्वार्ता प्रकाशित गरेको छ। प्रस्तुत छ साभार गरिएको उक्त अन्तर्वार्ताको अंश….
हो, प्रतिबन्धपछि हाम्रोतर्फ केही गम्भीर क्षति भए । कमरेड कुमार पौडेल, कमरेड महान, कमरेड नीरकुमारलगायत एक दर्जन नेता–कार्यकर्ता, कमान्डर र सदस्यहरूको सहादत भएको छ । केन्द्रीय नेताहरू कमरेड सुदर्शन, कमरेड वीरजङ्ग, शिलु, रणवीर, आदर्श, माइला, प्रज्वलन, हितमान, सुवास, बन्धु, दीपेशलगायत पार्टीका सयौँजना कमरेडहरू हिरासत र जेलमा हुनुहुन्छ । तर हामीले आफूलाई समाल्दै, सुदृढ गर्दै र रूपान्तरण गर्दै एकीकृत जनक्रान्तिलाई माथि उठाउँदै गएका छौँ । बलिदान र क्षतिले पार्टीमा केही कठिनाइ स्वाभाविक रूपमा आउँछन् तर बलिदान र क्षतिले पार्टीलाई खार्ने र ऊर्जा भर्ने काम पनि गर्दछन् । हाम्रो विजयलाई कसैले पनि रोक्न सक्नेछैन ।
निश्चय नै । तर मैले भनेँ नि क्रान्तिमा घेरा–प्रतिघेरा, दमन र प्रतिरोध, क्षति र उपलब्धि, पराजय र विजय अनिवार्य कुरा हुन् । कहिलेकहीँ अनावश्यक क्षति हुँदा गम्भीर पनि बनाउँछ परन्तु धक्कालाई शिक्षामा बदल्न सके विजयहरू आइपुग्छन् । हामीले त्यस्तो सफलता प्राप्त पनि गरेका छौँ ।
होइन, हाम्रो पार्टीले भारतीय साम्राज्यवादी अतिक्रमणका विरुद्ध देशव्यापी जागरण अभियान चलाइरहेको छ । जनताको साथ–सहयोग पनि राम्रो छ तर दलाल केपी सकरकार त राष्ट्र बचाउने सङ्घर्षमा आउनुको साटो हामीमाथि दमन गरेर भारतलाई रिझाउने अनैतिक कार्यमा लागेको छ । हेर्नुस्, साम्राज्यवादी शक्तिहरूले कमजोर देशमाथि अतिक्रमण गर्दा कहिलकहीँ मोर्चा बनाएर संयुक्त रूपले अतिक्रमण गरेका दृष्टान्तहरू पनि छन् । यतिबेला कालापानी क्षेत्रको भारतीय हस्तक्षेप र अमेरिकी एमसीसी ९सहस्राब्दी चुनौती परियोजना० को कानुन पारित गर्ने विषय भित्री साँठगाँठमा भएका छन्–छैनन् भनेर हेर्नुपर्ने भएको छ । हामीले जागरणमा यसलाई पनि जोडेका छौँ ।
एनसेलले राज्यलाई पौने एक खर्ब तिर्नुपर्छ भनेर त प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमै फैसला सुनाइएको हो । अनि किन अहिले बाईस अर्बको कुरा मात्र आएको छ रु यो निकै गम्भीर छ । यसमा वली सरकारकै साँठगाँठ देखिन्छ । एनसेलले जनतालाई ठगेसम्म कारबाही रोकिँदैन ।
कमरेड कुमार पौडेललाई सीधा शैलेन्द्र खनालको आदेशमा इन्स्पेक्टर कृष्णदेव साहको टोलीले योजनाबद्ध रूपले गोली हानी हत्या गरेको हो भन्ने त छ्याङ्छ्याङ्ती देखिसकियो । मानवधिकारवाद आयोग र अधिकारवादी संस्थाले समेत उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गर भनिसके । यस हदसम्म मानवअधिकार आयोग र संस्थालाई धन्यवाद नै दिनुपर्छ । तर हत्याका पछाडि दुईखाले अनुहार छन् ? एउटा कृष्णदेव साहहरूको हत्यारो अनुहार, अर्को भित्र बसेर पुलिसलाई गोली हान्ने योजना बनाउने र उक्साउने योजनकारहरूको अनुहार । हामीसँग तथ्यहरू आइरहेका छन् । यिनीहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ ।
ई रातोखबर बाट साभार
#२५ औँ जनयुद्ध दिवस